Jubbaland iyo Puntland oo soo dhoweeyay shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Jubbaland iyo Puntland oo soo dhoweeyay shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo
Jubbaland iyo Puntland oo soo dhoweeyay shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo
Maamulka Jubbaland ayaa aqbalay inuu ka qeyb galo shirka uu madaxweyne Farmaajo isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada, kaas oo 1-da illaa 3-da bisha Febraayo ee sanadkan 2021-ka ka dhacaya magaalada Samareeb ee xarunta Dowlad goboleedka Galmudug.
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheikh Maxamed ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha JFS,islamarkaana ka maamul ahaan ay ka qeyb galayaan.
Sidoo kale, Maamulka Puntland ayaa aqbalay shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee ka dhacaya magaalada Samareeb.
Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo tixgelinaya Xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka iyo baahida loo qabo Doorasho heshiis lagu yahay ayaa shir isugu yeeray madaxda Dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaas oo ka dhacay magaalada Samareeb ee xarunta mamaulka Galmudug.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay arrimo ku aadan guddiyada ay soo magacaabeen maamullada Jubbaland iyo Puntland & diidmada dowladda
Wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa ku tilmaamay go’aanka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya mid lagu doonayo muddo kororsi, sida uu hadalka u dhigay.
Hadalkan ayaa ku soo aadayo, iyada oo shalay madaxweynaha Soomaaliya oo qaabilay wakiilada beesha caalamka uu ku baaqay shirweyne ay markale isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamullada, si looga arrinsado
Previous articleنصائح صحة المرأة للقلب والعقل والجسم
Next articleWefti ka Socda Dawladda Ruushka oo Somaliland soo Gaadhay